Nantsoin'ny minisiteran'ny fizahantany Bahamas ho mpiara-miombon'antoka FINN ho masoivohon'ny PR PR New UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Nantsoin'ny minisiteran'ny fizahantany Bahamas ho mpiara-miombon'antoka FINN ho masoivohon'ny PR PR New UK
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny masoivohon'ny marketing sy ny fifandraisana tsy miankina manerantany, FINN Partners, dia notendren'ny Minisiteran'ny fizahantany, fampiasam-bola sy fiaramanidina Bahamas (BMOTIA) Bahamas hanome serivisim-pifandraisana ho an'ny nosy The Bahamas ao amin'ny Fanjakana Mitambatra. Ny biraon'ny FINN Partners 'UK dia hiasa ho maso ivoho ihany koa, mitantana ireo tsena eropeana hafa anisan'izany i Italia.
Ny FINN dia hiasa hampandeha ny paikadin'ny serasera feno sy ny programa PR hampitomboana ny marika Bahamas any UK.
Ny tanjona dia ny hiteraka fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpitsidika amin'ny ankapobeny, indrindra indrindra mifanaraka amin'ireo zotram-sidina UK vaovao.
Ny sidina British Airways sy ny fanombohana ny sidina Virgin Atlantic mivantana mivantana avy any London manomboka ny 20 novambra, no misy ny toerana ahitàna fiakarana lehibe amin'ny airlift.
Ny fifanarahana dia misy ny hevi-dehiben'ny fampielezan-kevitra, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny haino aman-jery ary ny fampihetsiketsehana, ny fandrindrana ny fitsidihana amin'ny haino aman-jery, ny hetsika, ny fanampiana ny influencer ary ny fifandraisana amin'ny krizy.
Ny ivon'ny asan'ny FINN ho an'ny BMOTIA dia ny hampandeha ny paikadim-pifandraisana feno sy ny programa PR hampitomboana ny fahitan'ny marika Bahamas ny tsenan'i UK. FINN Partners dia hampiroborobo ny kolontsaina nentim-paharazana, tantara, hetsika fialam-boly, natiora ary nahandro ao amin'ny The Islands of The Bahamas, mba hanampy amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny mpitsidika amin'ny toerana itodiana, indrindra amin'ny zotram-piaramanidina UK vaovao.
Ny Honorable I. Chester Cooper, ny praiminisitra lefitra ary ny minisitry ny fizahantany, ny fampiasam-bola ary ny fiaramanidina an'ny Bahamas dia naneho hevitra hoe: Ny FINN Partners dia nanolotra fomba fiasa holistic sy famoronana hanohanana ny paikadinay ary hanampy anay hanatratra ny tanjonay amin'ny fampitomboana ny fizahantany avy any UK. Matoky izahay fa nisafidy ny mpiara-miasa PR marina mba hampiroborobo ny toerana halehanay ary hiandrasana fiaraha-miasa mahomby. "
Joy Jibrilu, Tale Jeneraly, Ministeran'ny fizahantany, fampiasam-bola ary fiaramanidina Bahamas, dia naneho hevitra hoe: "Faly izahay nanendry ny mpiara-miombon'antoka FINN ho masoivohom-piraketana PR any UK. Ny tolo-kevitr'izy ireo dia nampiseho mazava tsara ny fahatakarany ny volavolan-kevitray sy ny tanjon'ny serasera, ary ny fahalalan'izy ireo sy ny fahaizany amin'ny tsena Karaiba dia faharoa. Ny Islands of the Bahamas dia manolotra kolontsaina, fialam-boly ary fiainana mampihetsi-po mahafinaritra izay tsy andrinay ny hizara amin'ireo mpivahiny anglisy. Mifanaraka amin'ny fiakaran'ny fiaramanidina avy any Angletera, izao no fotoana mety indrindra hanomezan-tsaintsika ny famandrihana avy amin'ity faritra ity. Manantena ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny ekipa FINN izahay mba hampitomboana ny fahafantarana ny The Bahamas sy ny hamaroan'ny toerana haleha. ”
Debbie Flynn, mpitarika ny fanazaran-tena momba ny dia an-tany, FINN Partners dia naneho hevitra hoe: "Fantatsika fa ny mpitsangatsangana britanika izao dia mitady traikefa malalaka, toerana malalaka, hatsaran-tarehy voajanahary ary traikefa ara-kolontsaina manankarena, ary ny Bahamas dia manolotra betsaka an'izany. Miaraka amin'ny famerenana ny direct mivantana
Ny sidina British Airways sy ny fanombohana ny sidina Virgin Atlantic mivantana mivantana avy any Londres mankany The Bahamas manomboka amin'ny 20 Novambra, no misy ny fiakarana mahita fiakarana lehibe eo amin'ny airlift manao azy
mora azo kokoa ho an'ny mpandeha UK mihoatra ny taloha. Misy fahafaha-manao lehibe ho antsika hanehoana izay atolotry ny toerana haleha hanampy amin'ny fampitomboana ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy any Angletera, ary tsy afaka miandry izahay hanombohana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Minisiteran'ny fizahan-tany, ny fampiasam-bola ary ny sidina Bahamas. ”
Ny portfolio FINN Partners UK Travel dia misy vondrona hotely mitarika toy ny Accor Luxury sy toeran-kaleha toa an'i Singapore, Capital Region USA ary Islandy.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary nosy itodiana tsy manam-paharoa 16, i Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, izay manome fialofana mora miala lavitra izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana fanjonoana, antsitrika, sambo an-tsambo, fanaovana vorona ary fikajiana natiora, an'arivony kilaometatra amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany sy ny morontsiraka madio miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ireo nosy rehetra atolotra ao bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.
Momba ny FINN Partners, Inc.
Niorina tamin'ny taona 2011 momba ny fotokevitra ifotoran'ny fanavaozana sy ny fiaraha-miasa fiaraha-miasa, ny FINN Partners dia mihoatra ny quadrupled habe tao anatin'ny valo taona, lasa iray amin'ireo masoivoho mahaleo tena haingana indrindra manerantany. Ny firaketana ny firaketana an-tsoratry ny orinasan-tserasera sy serasera serivisy dia vokatry ny fitomboan'ny organika sy fampidirana ireo orinasa vaovao sy olona vaovao ao amin'ny tontolon'ny FINN amin'ny alàlan'ny filozofia iraisana. Miaraka amin'ny matihanina maherin'ny 800, FINN dia manome ny mpanjifa fidirana sy fahafaha-manao manerantany any Amerika, Eropa ary Azia ary amin'ny alàlan'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Public Relations Organization International (PROI). Ny birao foibe any New York dia misy ny birao hafa ao amin'ny FINN any Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Frankfurt, Jerusalem, London, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, Shanghai , Singapore, Southern California ary Washington, DC Tadiavo izahay ao amin'ny finnpartners.com ary araho amin'ny Twitter sy Instagram ao amin'ny @finnpartners sy @finnpartnerstravel. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny FINN Partners, tsidiho finnpartners.com.